अध्यक्षले नेविसंघ नै तहस नहस बनाए | My News Nepal
नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) भित्र दिन प्रतिदिन विवाद चुलिदै गएको छ । अध्यक्ष नैनसिंह महरले मनोमानी तरिकाले संगठन चलाएको विषयलाई लिएर नेविसंघ भित्र विवाद चुलिएको हो । अध्यक्ष महर र उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले पटक–पटक संगठनको कार्यक्रमहरु छुट्टा–छुट्टै गर्दै आएका छन् । यसरी विवाद चुलिदै जाँदा समेत पार्टीले त्यसको समाधानको लागि हालसम्म कुनै पनि पहल गरेको छैन । नेविसंघबाट राजनीति शुरु गरेका शेरबहादुर देउवा यतिबेला पार्टी सभापति छन् । तर, सोहि संगठनभित्र यति ठूलो लफडा हुँदा पनि उनले खासै चासो दिएका छैनन् ।
महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आज(विहीबार) का लागि केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठक डाकेका थिए भने अध्यक्ष महरले २८ गते शुक्रबारका लागि बैठक डाकेका छन् । काफ्लेले उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी, प्रकाश राना, नविन राई, खड्ग डाँगी, डिल्लीराम सुवेदी लगायत दुई तिहाई केन्द्रिय समितिको सहमती लिएर बैठक डाकेका थिए । बैठकले यस अघि अध्यक्षले गरेको निर्णहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेविसंघ भित्र देखिएका चरम विवादका विषयमा उपाध्यक्ष अधिकारीसँग आजको बैठक अघि mynewsnepal.comका लागि कुमार भण्डारीले गरेको कुराकानी :
० नेपाल विद्यार्थी संघको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
– नेविसंघको अधिवेशन सम्पन्न भएको २० महिना पुगेको छ । नेविसंघ जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन । पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवम् ११ औं अधिवेशन सम्पन्न समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतको समितिले निर्धारण गरेको खाली ११ जिल्ला, विवादित १३ जिल्लामा तीन महिना भित्र अध्यक्षलाई अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने जुन कार्यभार सुम्पेको थियो, त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन । अध्यक्षज्यूको उदासिनता र उहाँको मनोमानीका कारण अझैपनि संगठनमा गति आउन सकेको छैन । अधिवेशको कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा उहाँ कोठामा बसेर मनोमानी तरिकाले विधान विपरित केन्द्रिय समिति बनाउने, आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य बनाउने, जिल्ला र क्याम्पसहरु टाँस्ने, मनोमानी तरिकाले आफ्ना नजिकका आसेपासेलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउने जस्ता गैरजिम्मेरी कार्य गरिराख्नु भएको अवस्था छ । जसले गर्दा नेविसंघभित्र विवाद चुलिदै गएको छ ।
० खासमा अहिले विवाद चाहिं कुन कुरामा हो ?
– नेविसंघको पहिलो बैठकले जुन दिशानिर्देश गरेको थियो, त्यो अनुसार अध्यक्ष चल्नु भएन । अध्यक्ष आफ्नो कोटरीबाट संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्ति बनाउनेतर्फ उद्दत हुनु भएको छ । प्रदेशिक संरचना अनुसार उपसभापति प्रदेशको संयोजक हुने, सह–महामन्त्री सदस्य सचिव हुने र प्रदेश समितिले प्रदेशभित्र हुने संगठनका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पाउने नेविसंघको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, अध्यक्षज्यूले अहिले पनि संगठनका हरेक क्रियाकलापमा आफै हस्तक्षेप गर्दै आउनु भएको छ । विधानले दिएको अधिकारलाई समेत उहाँले प्रयोग गर्न दिनु भएको छैन । जसले गर्दा संगठनभित्र विवाद चुलिएको हो ।
प्रदेशिक संरचनामा अन्य विद्यार्थी संगठन भन्दा पहिले नै नेविसंघ गएको थियो । सोही संरचानलाई आत्मासाथ गर्दै मैले पुस १५ गते मेलमिलाप दिवसको अवसरमा अध्यक्षज्यूको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुसँग सरसल्लाह गरेर विद्यार्थी जागरण अभियान सञ्चालन गरेको थिएँ । मैले अध्यक्षसँग पटक–पटक विद्यार्थी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, संगठनलाई चलायमान बनाउने, प्रशिक्षण दिनेजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गर्दा पनि उहाँदे कुनै चासो नदेखाएकै कारण मैले विद्यार्थी जागरण अभियान सञ्चालन गरेको थिएँ । उहाँसँग सहमति लिएर गरेको उक्त कार्यक्रममा समेत अध्यक्षज्यूले किन कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टिकरण माग्नु भएको थियो । आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने उहाँको शैलीले यतिबेल संगठन ओरालो लागेको छ ।
० त्यतिबेला तपाईमाथि कस्तो कारबाही भयो त ?
– अध्यक्षज्यूले मलाई तीन दिनभित्र कारबाही गर्ने भन्दै चिठी काट्नु भएको थियो । तर, मैले उहाँसँग मौखीक सहमति लिएर कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँदा कुनै पनि स्पष्टिकरण दिन आवश्यक ठानिन । सोही प्रकरणमा अनुशासन समितिका संयोजक राजेश रौनीयारले के कारणले उपाध्यक्षलाई चिठी काटेको भन्दै तीन दिन भित्रमा स्पष्टिकरणका लागि अध्यक्षलाई नै चिठी काटेपछि उहाँले त्यसको केहि समय पछि माफि माग्नु भयो । त्यसपछि मैले संगठनलाई गति दिने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु ।
० तपाईले कुन–कुन कार्यक्रम कहाँ–कहाँ गर्नु भयो त ?
– म जहिले पनि संगठनलाई उर्जा दिन क्रियाशिल छु । अध्यक्षले माफि माग्नु भएपछि कार्यक्रमहरु गर्न झन मलाई उर्जा थपियो । नयाँ बानेश्वरको अनुपम फुडल्याण्डबाट शुरु भएको हाम्रो अभियान अहिलेसम्म पनि जारी छ । सोहि अनुरुप हामीले ३ नम्बर प्रदेशको प्रशिक्षण धादिङ, २ नम्बर प्रदेशको प्रशिक्षण रौतहटको चपुर र १ नम्बरको प्रशिक्षण विराटनगरमा सम्पन्न गरिसकेका छौं । उपत्यकामा पनि प्रदेश नम्बर ३ ले विभिन्न कार्यक्रहरु सञ्चालन गरिसकेको छ ।
० नेविसंघले स्थापना दिवसको अवसरमा उपत्यकामा एकै दिन आयोजना गरेको अध्यक्षको कार्यक्रममा पार्टी सभापति र प्रदेशको कार्यक्रममा पूर्व महामन्त्री एवम् युवा नेताहरु गएका पनि छन् नि होइन ? यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
– नेविसंघ सबैभन्दा ठूलो र नेता विद्यार्थी संगठन हो । स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रिय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, क्याम्पस समितिलगायतले कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँछन् । यसैलाई विवाद बनाएर यो र त्योको नाममा अध्यक्षज्यूले संगठनलाई विभक्त बनाएर गुट सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ । जुन संगठनको हितमा छैन । नेविसंघ ठूलो संगठन भएका कारण जहाँसुकै यस्ता कार्यक्रम हुनु स्वभाविकै हो । मैले विधान सम्मत रहि नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रिय सदस्य शेखर कोइराला, कल्याण गुरुङलगायतलाई बोलाएर कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँ । नेपाली कांग्रेसको नर्सरी नेविसंघलाई शसक्त र बलियो बनाउन मैले यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छु । के संगठनलाई चलायमान बनाउनु मेरो अपराध ठहरिन्छ भने, यसलाई अध्यक्षज्यूले अपराध सम्झनुहुन्छ भने म संगठनका हितका लागि पटक–पटक यस्ता अपराध गर्न तयार छु । तर, मेरो अभियान कहिल्यै रोकिन्न ।
० केन्द्रिय समिति बैठक बोलाउने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ नि ?
– हो, यसमा झन ठूलो विवाद छ । मलगायत महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले उपाध्यक्षहरु प्रकाश राना, नविन राई, खड्ग डाँगी, डिल्लीराम सुवेदी लगायत दुई तिहाई केन्द्रिय समितिको सहमतिमा २० गते विहिबारका लागि केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठक डाकेका छौं भने अध्यक्षज्यूले हामीसँग कुनै पनि सल्लाह नै नगरी मनोमानी ढंगले २८ गते शुक्रबारका लागि बैठक डाकेको सुन्नमा आएको छ । हामीलाई दुई तिहाई पदाधिकारी एवम् केन्द्रिय सदस्य साथीहरुको सहमति र समर्थन छ । आजको विशेष बैठक दुई तिहाईको सहमतिमा नै डाकेका हौं ।
० तपाईहरुले केन्द्रिय समितिको विशेष बैठक किन डाक्नु भएको हो ?
– नेविसंघको अधिवेशन सम्पन्न भएको २० महिना वितिसक्दा पनि अध्यक्ष उदसिन भएको, मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको, संगठनलाई अधिवेशनको दिशानिर्देश गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको र यो अवस्थामा पनि संगठनलाई चलायमान बनाउन नसकेकोले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भएको हामीले बाध्य भएर विशेष बैठक डाकेका हौं ।
० विशेष निर्णय चाहिं के हुन सक्छ ?
– विशेष निर्णय अहिले नै नभनौं । केन्द्रिय समितिका साथीहरुसँग छलफल गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं । अध्यक्षले गरेका मनोमानी निर्णयहरु दुई तिहाई बहुमतले खारेज गर्छौं । र अधिवेशनको दिशानिर्देश गर्छौं । अधिवेशन नभएका जिल्ला, खाली जिल्लालगायत क्याम्पसहरुमा अधिवेशनका लागि समितिमा छलफल चलाएर प्रतिनिधिहरु खटाउने काम गर्छौं ।
० पार्टी नेतृत्वको विषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरु उठिरहेका छन् नि ?
– पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई जसरी हाँक्नु पर्ने हो, त्यसरी हाँक्न सकेको छैन । पार्टी भित्र गुट उपगुटहरु मौलाएका छन् । काम गरेको आधारमा मूल्यांकन र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पार्टी भित्र त्याग र निष्टाको राजनीति समाप्त भएको छ । त्यसैले गर्दा हामी निर्वाचनमा पराजयका शिकार भएका हौं । अब पार्टी नेतृत्व सच्चिन आवश्यक छ ।
० अन्त्यमा नेविसंघप्रति आस्था राख्ने विद्यार्थीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– यति ठूलो संगठनभित्र साना तिना विवादहरु देखिनु स्वाभाविक नै हो । नेविसंघ भित्र विवाद छ भन्दैमा विद्यार्थीहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । विवादको न्यूनिकरण गरेर संगठन अगाडि बढ्छ । विद्यार्थीको हक हितमा सबैभन्दा बढि काम गर्ने, सक्रिय रहने संस्था नेविसंघ नै हो । यस अघि राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेको नेविसंघ अब शैक्षिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तका निमित्त अगाडि बढ्छ । म विद्यार्थी सार्थीहरुलाई संगठनको विधान र अधिकार भित्र रहेर संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन भूमिका निर्वह गर्ने जो कोहीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । म सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमी विद्यार्थीहरुलाई नेपाल विद्यार्थी संघको मसला र कमल अंकित झण्डामुनी गोलवद्ध रहेर विद्यार्थीको हक हितका निमित्त लड्न अपिल गर्दछु ।